Izindaba - Izici zendwangu yesudi enezithako ezahlukahlukene
Okokuqala, Ake ngikubuze umbuzo: ingabe isudi inezingxenye ezimbili: indwangu nezinye izinsimbi?
Cha, impendulo ayilungile.Isudi lakhiwe izingxenye ezintathu: indwangu, izesekeli kanye nolwelwesi.
Indwangu nezesekeli kubaluleke kakhulu, kepha ikhwalithi yesudi incike kulolongo, ngoba ixhuma izinto ezimbili ezihluke ngokuphelele ze-ductile, indwangu nezinye izinsimbi.
Indlela eshibhile, efanelekile yengubo ukusebenzisa ulwelwesi olunamathelayo, noma ngabe yini eyenziwe ngezandla, kepha ukusebenzisa isudi yokunamathisela ingcina isengaphansi kuka-2000 yuan okulandelayo, izinga eliphansi lesudi yokunamathisela enamathela phakathi nesikhathi esithile, uzothola ukuthi isudi yezindwangu nezesekeli ngeke zisalingana, zidonsana ziye kolunye uhlangothi, kubonakala sengathi kungukuhlukaniswa komdlalo.
Ulwelwesi oluhle, isibonelo, amasudi ebhizinisi enziwe ngu YUNAI kufanele yenziwe ngoboya, ilineni nemane yehhashi. Ngamafuphi, izinto zemvelo ziyadingeka. Inhloso ukusiza indwangu yesudi nezinye izinsimbi ukuthi zihambe ngezinga elithile ngenkathi zisizwa ukuthi zisethe kabusha.
Isici sesibili: yize ikhwalithi yezinto ezisetshenzisiwe zithonywe yizici eziningi, intengo yendwangu manje incike kakhulu endaweni lapho idabuka khona. Intengo yezindwangu ezifuywayo yehluke kakhulu kuleyo yezindwangu ezingenisiwe, ikakhulu ezivela e-Italy naseBrithani.
Izindwangu zesudi ephezulu emhlabeni zifaka phakathi: u-Ermenegildo Zegna , LORO PIANA ,VITALE BARBERIS CANONICO ,REDA ,ICERRUTI 1881, YUNAI, okuyisidlakela soboya sase-Italy; Kubuye kube uphawu lokulinganisa kwekhwalithi yoboya. UCHARLES CLAYTON, abane abalandelayo bangabakhiqizi bakudala baseBrithani nababaluleke kakhulu. Imikhiqizo ephezulu kakhulu yendwangu yehembe yiBrithani THOMAS MASON, Switzerland Alumo, Italy MONTI, LEGGIUNO, FERNO njalonjalo.Isitolo sangokwezifiso sinezinhlobo ezingaphezu kwezimbalwa zamasudi nezindwangu zehembe ngokuyisisekelo isitolo sangokwezifiso esiqeqeshiwe kakhulu.
Imvamisa, la mafektri anezidingo eziqinile kumazinga wobuchwepheshe ezitolo ezenziwe ngokwezifiso. Kuphela lapho befika emazingeni ahambisanayo lapho bezogunyaza khona ukusetshenziswa kwezindwangu zabo kanye nezimpawu zokuthengisa.Ngaphezu kwalokho, noma ngabe usebenzisa izindwangu zasekhaya noma ezingenisiwe, izithako empeleni zoboya, empeleni, zizoba khona ezinye izithako, njenge-cashmere , kepha izindwangu ezisezingeni eliphakeme zenziwe ngezindwangu zemvelo kunezinto zokwenziwa, kepha awukwazi ukwenza izimfuno eziqinile kakhulu ezindwangu zasekhaya.
1. Indwangu ehlanzekile yoboya
Indwangu yoboya isho indwangu eyenziwe ngoboya noma uboya kanye ne-polyester, i-viscose, i-acrylic, njll.
Uboya obenziwe kabi ngendwangu yezingubo esezingeni eliphakeme eyenziwe ngoboya bezimvu obuhlanzekile futhi obuhlanzekile, obungaxubaniswa nenani elithile lensimbi yamakhemikhali eboya noma enye ifayibha yemvelo, futhi kucutshungulwe ngemishini yokukama, ukukama, ukubhala, ukuphotha, ukweluka, ukudaya nokuqeda izikhathi eziningi.
Inokuguquguquka okuhle ukuthi indawo yezinwele zezilwane inezinhlobo ezehlukile, zocansi oluthambile, ubulili obuhlukile obuhlukile kanye ne-crape emelana nocansi, lapho imunca umswakama noma isithukuthezi sangemuva ukuze iqhubeke inocansi olufudumele.
Izingubo ezenziwe ngomumo ezenziwe ngezindwangu zoboya obuhle ziyaqina futhi ngeke zikhubazeke isikhathi eside. Zinesizotha ikakhulukazi ngenxa yokushoda kwe-aurora. Zibushelelezi futhi zibushelelezi ekubunjweni, zihle ngokubukeka, zihlwabusile futhi zihhahhameze, zigcwele ukuthintana, isitayela sakudala, zithambile futhi zemvelo zikhazimula njalonjalo.
Okubizwa ngokuthi yi-worsted noboya bezinwele, wazama ukuchaza ukuthi, kusuka e-engela yezimbili eyodwa kungaphezulu kwe-fiber, okunye ukweluka, i-fiber ukuphotha ingama-32 nangaphezulu kwama-40, kubalwa i-fiber yamasipha abushelelezi, amancane, ubukhulu bemvelo, ukumelana nemihuzuko okuhle, induduzo enhle, enye iyiluka, indwangu eboshwe kakhulu ngomshini wendwangu omuhle, ukuvimbela ukuphuka kwefayibha, izinga eliminyene liphakeme, indwangu yoboya, okuhlangene, okulula ukuphuka, umehluko wokumelana nokugqoka kwemvelo, ukuminyana akulungile.
Izindwangu ezihlanzekile zoboya obucwengekile mncane kakhulu, bunobuso obushelelezi kanye nemigqa ecacile.
Umzimba upholile, uthambile futhi unwebeka.
Bamba okokusebenza ngemuva kokukhulula, ngokuyisisekelo akukho phinda, noma ngabe kukhona ukusikeka okuncane nakho kunganyamalala ngesikhathi esifushane kakhulu.
Ukukhonjwa kwendwangu yoboya emsulwa:
Indwangu yoboya emsulwa ngombala wemvelo othambile nomphumela omuhle wokushisa kuyindlela yokuqala yokwenza amasudi ebanga eliphezulu namajazi.
Kepha manje izindwangu ezifana noboya, njengokuthuthuka kobuchwepheshe bezindwangu, zifinyelele ezingeni lamakhasimende amaningi okunzima ukuwakhomba, kepha umbala, imfudumalo, imizwa njalonjalo kuncane kakhulu kunezindwangu zoboya obumsulwa.
Okulandelayo kwethula izindlela eziningi zokuhlonza indwangu yoboya emsulwa, ukuze uyithole lapho ukhetha okokwembatha nofulawa.
Izindwangu zoboya obumsulwa zivame ukuzwa izindwangu zoboya obushelelezi, ezinde kanye nokuzizwa kwezinwele ezibushelelezi, nezihlehlisayo.Futhi ifayibha elihlanganisiwe noma elihlanzekile lamakhemikhali, eminye ithambe kancane, eminye ithambe kakhulu futhi ivulekile, futhi inamathele.
Okwesibili, bheka umbala.
Umbala wendwangu yoboya obuhlanzekile uthambile futhi ungokwemvelo, uyakhanya futhi awunasikhathi.Ngokuphambene, indawo ehlanganisiwe noma emsulwa yefayibha yamakhemikhali, noma i-luster imnyama, noma inomqondo we-flash.
Okwesithathu, bheka ukuqina.
Bamba indwangu ngokuqinile ngesandla, bese uyidedela ngokushesha ukuze ubone ukuthi indwangu inwebeka kanjani.Isilinganiso sokwenyuka kwendwangu yoboya obuphezulu siphezulu, singabuyisela ngokushesha esimweni sayo sokuqala, futhi sihlanganise noma imikhiqizo yamakhemikhali e-fiber, ukumelana nemibimbi akukubi, iningi amamaki ombimbi asobala, noma ukululama kancane.
Okwesine, Inkomba yomlilo.
Thatha inqwaba yentambo, sebenzisa umlilo, uboya obucwengekile be-fiber unuka njengezinwele ezivuthayo, i-chemical fiber iphunga njengeplastikhi evuthayo.Lapho izinhlayiya ziba nzima kakhulu ngemuva kokushisa, izingxenye ze-fiber zamakhemikhali zikhona.
Okuhlanu, Ukuhlonza izimpande okukodwa.
Izinwele ngaphansi kwesibonakhulu ukubona zonke izilwane zinezikali, uma izindwangu ezinde zezinwele uma nje kuthatha izinwele ezinjengezingenhla zibekiwe izikhathi ezimbalwa zizoya phezulu noma phansi (ukuze ukwazi leli khono kungathatha izinwele ekuhlolweni kokuqala), uma kuyindwangu ejwayelekile, ekhipha umucu wezimpande, usike u-2 cm wezigaba ezimbili kwifayibha eyodwa ngaphansi kokugcotshwa kwesandla ezine noma ezinhlanu, bezinganyakazi.
1. Indwangu ehlanganisiwe yoboya ne-polyester
Indwangu ehlanganisiwe yoboya, okuyi-cashmere, i-polyester, i-spandex, izinwele zonogwaja neminye imicu kanye nezindwangu ezixubene zendwangu. indwangu ivulekile, cishe ayikho imibimbi.
Isiqondisi se-Warp, i-warp, ubukhulu be-warp
- Ukuqondiswa kobude bendwangu;
Imicu eseceleni ibizwa ngokuthi imicu eqondile.
Inani lezintambo ezihlelwe ngaphakathi kwe-1 intshi ubukhulu be-warp;
Isiqondiso se-Weft, ukugcwalisa nokugcwalisa kwabantu
- Ukuqondiswa kobubanzi bendwangu;
Intambo ibizwa ngokuthi i-weft, futhi inani lezintambo ngaphakathi kwe-intshi ubukhulu be-weft.
- Isetshenziselwa ukumela inani lezintambo ngobude beyunithi ngayinye yendwangu yokuhamba, imvamisa inani lezintambo ngaphakathi kwamasentimitha ayi-1 noma amasentimitha ayi-10. Izindinganiso zikazwelonke zaseChina zichaza ukuthi inani lezintambo ezingaphakathi kwamasentimitha ayi-10 lisetshenzisiwe ukumela ukuminyana, kepha amabhizinisi endwangu asasebenzisa inani lezintambo ezingaphakathi kwe-intshi eyodwa ukumela ukuminyana.
Isibonelo, okuvame ukubonwa i- "45x45 / 108x58" kubhekiswa kuzintambo ezingama-45 weft kanye ne-warp ezinesisindo esingu-108 no-58 ngokulandelana.
- Ububanzi obuyimpumelelo bendwangu buvame ukuvezwa ngamasentimitha noma amasentimitha. Okuvamile ngamasentimitha angama-36, amayintshi angama-44, ama-intshi angama-56-60, njll. Izindwangu eziphakeme kunamasentimitha angama-60 zibanzi ngobubanzi, ngokuvamile ezibizwa ngendwangu ebanzi ebanzi.
Ububanzi ngokuvamile bumakwa ngemuva kwesibalo. Isibonelo, uma indwangu eshiwo ku: 3 yengezwa nobubanzi, izovezwa njenge- "45x45 / 108x58 / 60" ", okusho ukuthi ububanzi buyizingalo ezingama-60.
- Isisindo segremu sendwangu ngokuvamile siyigramu yesisindo sendwangu kumamitha ayisikwele. Isisindo segramu siyinkomba yezobuchwepheshe ebalulekile yezindwangu eziboshwe, futhi isisindo segremu sithathwa njengenkomba yezobuchwepheshe ebalulekile yezindwangu zoboya.
Isisindo segramu se-denim ngokuvamile sivezwa njenge- "OZ", okungukuthi, inani lama-ounces wesisindo sendwangu egcekeni ngalinye lesikwele, njengama-ounces ayi-7, ama-ounces ayi-12 ama-denim, njll.
EJapan, ibizwa ngokuthi "indwangu edayiwe", okusho inqubo yokudaya intambo noma intambo bese iluka indwangu ngentambo enemibala. Lolu hlobo lwendwangu lubizwa ngokuthi "indwangu edayiwe ngentambo". Amafektri akhiqiza indwangu edayiwe ngentambo ngokuvamile abizwa ngokuthi amafemu wokudaya nokweluka, afana ne-denim, futhi izindwangu eziningi zehembe zidaywe ngentambo.
2. Indwangu ehlanganisiwe yoboya kanye ne-viscose
Ukuzizwa okubi kakhulu kubuthakathaka, kanti umuzwa woboya awukhululekile.
Lolu hlobo lwendwangu lunwebeka kancane futhi luhlwabusile kunoboya obuhlanzekile noboya-i-polyester, indwangu ehlanganiswe noboya.Uma okuqukethwe kwe-viscose kuphakeme, indwangu kulula ukuyigoqa.
Indwangu ehlanzekile yamakhemikhali e-fibre efana ne-viscose yendabuko, i-fiber yoboya bokufakelwa njengezinto zokusetshenziswa zendwangu efana noboya, ukufiphala okukhazimulayo, ukuthamba okuthambile, ukungabi nemizwa emnandi.Ngenxa yokuthi ukuqina kubi kakhulu, kuvela kalula njenge-crape, futhi akulula ukufiphala. indlela ephumelelayo yokuhlonza indwangu ye-viscose ukuthi amandla entambo akhishwe endwangu kusobala ukuthi anciphile lapho emanzi kunangesikhathi somile.Ngaphezu kwalokho, le ndwangu efana noboya iyaqina futhi iqine ngemuva kokucwila.Ngenqubekela phambili yesayensi nobuchwepheshe , imikhiqizo mbumbulu yoboya ngombala, imizwa, ukuqina nakho kube njalo.
Ngokuvamile, ingxenye ethile yezinwele zikanogwaja noboya buhlanganisiwe futhi belukwa. Izici zeswidi likanogwaja zilele kwimicu yayo emihle, ukuzwa okubushelelezi nokuthambile, ukuthamba kobuso obuthambile nobuntofontofo, nokufudumala okuhle. Kuyinto entofontofo futhi engokwemvelo ukugqoka, futhi ubuthongo obuphakathi nendawo kulula ukuwa.
Uma inqubo yokwenza ijezi kuqala bese kudayiwe (okusho ukwelukwa bese kudayiwe) yamukelwa, umbala nokukhazimula kuzoba msulwa futhi kube muhle, kube ne-latti eyingqayizivele, efaneleke ikakhulukazi ezingutsheni zangaphandle zabesifazane abasebasha.
Izinwele ze-Chemical fiber
Isici esivamile sezingubo ukukhanya kwayo.
Yiba njengeyunifomu ye-acrylic, uluke ngentambo yenqwaba ye-acrylic imvamisa, umumo woboya bayo uzizwa unamandla, umbala nokukhazimula, ikhwalithi yento ukukhukhumala okuthambile okulula, isilinganiso somswakama sokubuyisa siyi-0-4.5% kuphela, amandla we-fiber break mude kune-fiber yoboya, ngeke ibhu, kepha ukuguquguquka kwalo isilinganiso esibuyekeziwe siphansi kunoboya, gcina ubulili obufudumele buncane kunejezi loboya elimsulwa, intengo ishibhile, kepha iphala kalula, ilungele izingubo zezingane.
Muva nje, imakethe yamazwe omhlaba eya ku-acrylic, i-polyamide fiber ntambo ehlanganisiwe, ishintshiwe i-acrylic mbumbulu yensimbi, okuyi-sweaters kungafaniswa nezinwele zemvelo zonogwaja, okokugqoka kwe-mohair.
Izinwele zezilwane ezihlanganiswe nemicu yamakhemikhali
Inezici "ezihambisanayo" zezinwele zezilwane ezahlukahlukene kanye nemicu yamakhemikhali, futhi ukubukeka kwayo kunoboya, amandla wokunwebeka ayathuthukiswa, futhi nezindleko zejuzi ziyancipha. Ungumkhiqizo omuhle futhi ongabizi kakhulu.
Kepha kuswidi elihlanganisiwe, kunenkinga yokuthi umphumela wokudaya awulungile ngenxa yekhono elihlukile lokudaya nombala wokumunca umbala wezinhlobo ezahlukahlukene zemicu.
3. Impahla efana noboya bokufakelwa
AbaseBrithani baba ngabokuqala ukutadisha ukukhishwa kwamaprotheni ku-glue yezilwane ukwenza imicu yamaprotheni okwenziwa.
Ngo-1935, abanye abantu e-Italy bazama ukukhipha ushizi obisini ukuze benze uboya bokuzenzela.
Kusukela lapho, amanye amazwe athole impumelelo ekwenzeni i-fiber yokufakelwa kusuka kumaprotheni wesoya kanye neprotheni yamantongomane.
Ngenxa yezinkinga zokusetshenziswa kanye nezindleko zokukhiqiza zale micu, ukukhiqizwa kuncane.
YUNAI ukufiphala, ukungabi nemizwa emnandi, ngenxa yokuqina okungaqinile, kulula kakhulu ukuvela zou Fold, futhi akulula ukunyamalala.
Kunezinhlobo ezimbili zemicu eyenziwe ngumuntu: i-fiber evuselelwe ne-fiber yamakhemikhali. I-fiber evuselelwe i-viscose fiber eyenziwe ngokhuni nochungechunge lwotshani ngokucutshungulwa kwamakhemikhali.
I-fiber fiber yintambo yokwenziwa eyenziwe ngophethiloli, igesi yemvelo, amalahle nemikhiqizo yezolimo.
Ngokwakheka nokusetshenziswa kwemicu eyenziwe ngumuntu, kunezinhlobo ezintathu: i-rayon, i-rayon noboya.
Izinhlobo ezibalulekile zine-viscose fiber, i-acetate fiber, ithusi le-ammonia fiber nokunye.
I-fiber evuselelwe ingahlukaniswa ibe yi-cellulose fiber evuselelwe, i-cellulose ester fiber, i-protein fiber kanye nenye i-polymer fiber yemvelo.
Izici zayo ziqhathaniswa nemicu yamakhemikhali, imicu eyisisekelo.
Indwangu eyenziwe ngomuntu eyenziwe ngokuyisisekelo ukukhomba intambo ye-viscose fiber kanye nendwangu eyinsika yefayibha, okuyikotini elenziwe ngabantu abantu abalaziyo, i-rayon njll.
Ngaphezu kwalokho, kufaka phakathi ingxenye yendwangu ecebile ye-fiber nendwangu yobude obuphakathi nendawo phakathi kwentambo nokudla okuyisisekelo.
Ngakho-ke, izakhiwo zezindwangu ze-fiber zomuntu ikakhulukazi zinqunywa yizici zemicu ye-viscose.
1. Izindwangu zeRayon nezerayon zithambile uma zithintwa, ziyaphefumula futhi zikhululekile ukugqoka, futhi zinemibala egqamile.
2. Indwangu eyenziwe ngomuntu eyenziwe nge-fiber ine-hygroscopicity enhle, futhi i-hygroscopicity yayo ihamba phambili ku-fiber fiber. ngaphambi kokusika kwakungcono.
3. Indwangu evamile ye-viscose inezici zedrape enhle, ukuqina okungalungile, ukuqina nokuqina kwemibimbi, ngakho-ke ingubo yayo inokulondolozwa kohlobo olubi futhi ithambekele ekushwabaneni.
4.Indwangu ye-viscose fiber ine-acid enhle ne-alkali ukumelana, ukumelana nelanga nokunye ukumelana nemithi.
5.Impahla ehlanzekile efana noboya bamakhemikhali
Ngokuvamile, i-fiber yokwenziwa isetshenziswa njengezinto ezisemqoka, i-fiber yokufakelwa noma usilika onemibala njengentambo yokusiza, kanti enye ifayibha yokwenziwa kwenoveli isetshenziswa njengempahla eyinhloko, enokwakhiwa kwendwangu efanelekile. Lolu hlobo lwendwangu lunezinhlobo ezimbili zesitayela esifana noqalo, isitayela semvelo.
Inesici sesitayela semvelo sefayibha yemvelo.
Indwangu ikhanya ngombala, inhle ngokukhazimula, iyakhripha futhi iyanwebeka, ilungele umphakathi.
I-Chemical fiber fiber, isici esivamile sezingubo silula.
Muva nje, imakethe yomhlaba wonke ku-acrylic, poly-phakathi kwentambo ehlanganisiwe yensimbi, intambo eguquguqukayo yokulingisa i-acrylic, okuyihembe lakho kungafaniswa nezinwele zemvelo zonogwaja, okokugqoka kwe-mohair.
Uboya obuhlanganisiwe bezinwele zezilwane nefayibha yamakhemikhali, nezinwele zezilwane ezahlukahlukene kanye nefayibha yamakhemikhali "izici ezihambisanayo", ukubukeka kwayo kunemizwa yoboya, amandla okuxhuma ayathuthukiswa, anciphise izindleko zeswidi, iyimikhiqizo eshibhile futhi emihle.
Kepha kuswidi elihlanganisiwe, kunenkinga yokuthi izinhlobo ezahlukahlukene zemicu zinekhono lokudaya elihlukile nekhono lokumunca umbala, okwenza umphumela wokudaya ungabi muhle.
Hlukanisa phakathi kwento efana noboya bamakhemikhali nendwangu yoboya emsulwa:
Indwangu efana noboya yenziwe kakhulu nge-fiber yamakhemikhali, futhi i-viscose fiber ingaphezulu, njenge-polyester / viscose medium medium wool, i-polyester emsulwa neminye imikhiqizo efana noboya.
Okokuqala, isicwebezelisi sihlukile.
Indwangu yoboya emsulwa ikakhulu ithambile futhi ingeyemvelo, inombala omncane ongakhanyi. Indwangu yoboya obumbumbulu be-Chemical fiber icebile ngombala futhi iyakhanya. Uma ubheka ngokucophelela ngaphansi kwelanga, uzovame ukubona izindawo ezikhanyayo nezikhanyayo zokukhanya.
Leli phuzu lokulingisa uboya obupholile ukufana nendwangu yoboya futhi lingahle lihlukaniswe.
Okwesibili, ukuzizwa nokuqina kuyahluka.
Izindwangu zoboya obumsulwa zizizwa zithambile, ziphaphathekile kancane, ithambo lomzimba, lishwabene kancane kepha alikho kanzima, lithambile kodwa aliphindanga laqonda;
Ngenkathi i-polyester, ibukeka njengoboya, kepha ithambile futhi ibushelelezi, alikho ithambo lomzimba, elishwabene kakhulu, ukubuyela emuva okuhamba kancane.
Okwesithathu, shisa usilika ngemuva kokudweba.
Intambo yendwangu ehlanzekile yoboya ingabonakala ngemuva kokungalingani kwentambo yoboya, ubude obuhlukile, i-curl yemvelo, ne-viscose ilingisa ubude bendwangu yoboya be-fiber, ubukhulu bokufana buyafana.
Ngemuva kokushisa, ngemuva kokuthi umlilo uvutha kancane, ushiye umlilo uqhubeka uvutha, izinwele zihambisana nephunga, umlotha, ikhiyubhu emnyama emnyama, i-twist okuyi-powder yezindwangu ezihlanzekile zoboya, futhi eduze komlilo kuyasha, kuvutha ngokushesha , ilangabi eliphuzi, ukushisa ngocingo, umlotha onokukhanya okundizayo okulula okumpunga, omhlophe futhi ushiye kunzima ukuchoboza isigaxa se-polyester / viscose.
Iphinde ishiye isigaxa esimnyama ngemuva kokusha.
Kusuka kuzithako ezimbili noma ezimbili noma ngaphezulu noma indwangu ehlanganisiwe: uboya / i-viscose, uboya / i-polyester, uboya / usilika, uboya / i-viscose / i-spandex, njll., Ayidingi nje kuphela ukuqonda ngokuqinile izinhlobo ezahlukahlukene ze-fiber morphology nezakhiwo, futhi indlela yokusebenzisa ukuhlonza i-fiber eminingi, kusuka ekubukeni futhi, ukushisa ukusha esivivinyweni ngemuva kokuhlolwa, ingafika esiphethweni ngokuphepha.
Ukwenziwa koboya bokunciphisa amandla yinto evamile yoboya ngemuva kokwelashwa kwamakhemikhali kanye nokwelashwa ngokomzimba, ukubhujiswa kwesikali se-fiber fiber, nange-ejenti yokuhlola amakhemikhali, kwenza uboya bube bushelelezi, bucwebezele, bungangeni uma buwashwa, bulungele izingubo zomshado.
Ukwenza uboya obukhethekile ukwelashwa kwemikhiqizo yoboya enqubeni yokulungisa umbala wokudaya nophela.
Uboya budinga ukloriniswa nguBasolan I-DC noma iphathwe nge-protease ukuqeda izikali ezingaphezulu zoboya futhi yehlise umehluko phakathi kwesilinganiso sokungqubuzana ngesikhathi sokuqhubekisela phambili nokubuyela emuva koboya. Ngemuva kokwelapha, ubukhazikhazi boboya buyakhuphuka, obaziwa kakhulu ngokuthi uboya obunamanzi.
Uboya obunamamitha bungalukwa kusuka koboya obumsulwa noma buhlanganiswe.
Izici eziyinhloko ama-anti-shrinkage, umshini - i-washable, anti-pilling.
Ubuchwepheshe boboya obuneMercerized buqale maphakathi nawo-1990s, ubuchwepheshe bokudaya nokuqedela obusha obenziwe ngesisekelo sobuchwepheshe bendabuko bokuchofoza kanye nobuncane bokuvikela uvolo.
Indwangu yoboya obuphathwayo inemizwa ye-cashmere nokukhanya oku-silky.
Ngenxa yalezi zici, imikhiqizo evusa uboya yasheshe yaduma.
Kuze kube manje, uvolo we-mercerized ubusuthandwa kakhulu, isabelo semakethe sesedlule inani loboya obujwayelekile.
Kunemiqondo eyehlukene ngoboya obunamamitha eChina nakwamanye amazwe emhlabeni. E-China, uboya obuhlutshulwe i-phosphorus bubizwa ngokuthi yi-mercerized wool, kuyilapho uboya bezimvu bomhlaba wonke bushunqiswa ngomusi oshisayo, futhi belulwa ngo-30% ~ 50%. Ngemuva kwalokho, ngemuva kokupholiswa ngamanzi abandayo nokwakheka, uboya bezimvu obude nobuzacile bubizwa ngokuthi yi-mercerized wool.
Uboya ngokuvamile kubhekiselwa kubo njengendwangu yefayibha yoboya.
I-wool fiber ngama-molecule amaprotheni ahlanganiswe ndawonye, ​​ukuvela koqweqwe oluyingqayizivele lwesakhiwo esilinganiselwe se-horny scale, esimbozwe ngokuqinile, isakhiwo se-flake sincane kakhulu, inzuzo yaso ukuvimbela ukungcola kungene ku-fiber, ngakho-ke, izingubo zoboya azingcolisi kalula.
Izindlu zokuhlanza ezomile zivame ukuhlangana nezindwangu ezahlukahlukene lapho zihlanjwa, futhi nezingubo zoboya nazo ziyinsakavukela.
Isizathu sokuthi kungani uboya bukhiqiza ukukhanya okukhanyayo yilokhu:
(1) Isendlalelo esikala ngama-horny ebusweni befayibha yoboya sigqokwe ngokwengxenye;
(2) Uthuli nokungcola kugcoba kancane bese unamathela emseleni, ukuze indawo yendwangu ibe bushelelezi, ibangele ukukhipha ukukhanya njalo, okuholela ekukhanyeni okukhanyayo.
Izindlela zokususa ukukhanya:
(1) Isinkwa singasontwa sibe ufulawa bese sisakazwa ekukhanyeni, ngensimbi kube yinsimbi;
(2) I-Pickling: Cwilisa isisombululo se-acetic acid nge-3-5% kanye nokushisa okungu-50℃ imizuzu engu-3-5, bese ugeza ngamanzi acwebile.
Uviniga omhlophe ungasetshenziswa futhi.
(3) Shayela ibhulashi lapho ugeza.
I-fibre iyi-fiber yemvelo, ingumphumela wembewu yezitshalo, iziqu namaqabunga anezinhlayiya eziningi zamakhemikhali ayinayo ikhwalithi enhle, isakhi sofuzo esine-hydrophilic eningi ku-fiber fiber, i-hygroscopicity enhle, egqoke ukumunca izithukuthuku, ukungena komoya, ukunethezeka, ne-hemp futhi kupholile , ukuthamba, hhayi ukunamathela kuzimpawu ezisetshenziswa kakhulu embonini yezingubo, zamukelwa ngumthengi.
Izinzuzo: ukuthamba nokunwebeka esandleni, ubukhazikhazi obuthambile nobungokwemvelo, obuntofontofo nobuhle bokugqoka, umuzwa osezingeni eliphakeme, ukumuncwa okuhle komswakama, akulula ukushisa ukuqhuba, ukulondolozwa okuhle kokushisa, ukumelana ne-crease, ikakhulukazi ngemuva kokulungiswa kwengubo noku-ayina ukubumbela nokuvikela ukwakheka kwengubo;
Qaphela: Izinga lokushisa elifanele ukuwashwa akumele libe phezulu kakhulu, ungalihlikihli noma ulisonge ukuze ugweme ukushiswa yilanga.
Ukucindezela iphuzu: Uku-ayina okumanzi, uku-ayina okomileyo kusuka kolunye uhlangothi.
Okungalungile: i-alkali - ukumelana, ukuncipha, okulula ukushwabana.
8. Indwangu ye-Wool-polyester
Indwangu ye-Wool-polyester (wool-polyester): Indwangu eyenziwe ngoboya kanye nezintambo ezihlanganisiwe ze-polyester, uhlobo oluvame kakhulu lwendwangu ehlanganiswe noboya.
Indwangu eyenziwe ngoboya obuhlanganiswe noboya be-polyester.
Isilinganiso esivamile sokuxubaniswa koboya-polyester singama-45∶55, engeke igcine kuphela inzuzo yoboya, kepha futhi inikeze ukudlala okugcwele kusizakala kwe-polyester.
Cishe zonke izindwangu ezimahhadla nezimbi kakhulu zinezinhlobo ezihambelanayo zokuhlanganiswa koboya-i-polyester.
Phakathi kwazo indwangu yoboya-polyester obuncane obushubile obubizwa nangokuthi opholile, owaziwa kakhulu ngokuthi uvolo upholile ngempela, yizimpawu zokuxubana zoboya-polyester ezibonisa kakhulu zezinye zezindwangu.
Kukhona i-warp-ply warp ne-weft, i-double-ply warp, i-single-ply weft ne-single-ply warp ne-weft.
Ngokuvamile nge 50 ~ 70 owesilisa imicu double, izindwangu ohlabayo nge 100 ~ 120 owesilisa imicu double.
Isisindo sendwangu cishe siyi-170 ~ 190 g / m 2.
Uma kuqhathaniswa ne-tweed yoboya, i-wool-polyester tweed mncane ilula futhi ilula ekubunjweni, ngokubuyiselwa okuhle kwemibimbi, ukuqina nokuqina kokugqoka, kulula ukuwasha, ukushesha ukoma, ukuncenga okuqinile, ukuzinza ngosayizi, kepha hhayi bushelelezi njengoboya.
Uma usebenzisa i-polyester elula njengezinto eziluhlaza, ubucwebecwecwe besilika.
Uma uboya bezilwane obukhethekile obufana ne-cashmere noma uboya bekamela busetshenziswa entweni eluhlaza yokuxutshwa, iyozizwa ishelelezela futhi inamathele.
Isilinganiso esijwayelekile sokuhlanganiswa kwe-wool-polyester ngu-45: 55, ongeke ugcine izinzuzo zoboya kuphela, kepha futhi unikeze ukudlala kuzinzuzo ze-polyester.
Izinzuzo: uboya obuhlanganiswe ne-polyester, ukukhanya nokukhanya kokuthungwa, ukusebenza okuhle kokuthola imibimbi.
Luhlala isikhathi eside, kulula ukuwasha futhi lome, luzinzile ngosayizi, luhlala isikhathi eside
Amaphoyinti okugeza: cwilisa ngamanzi abandayo imizuzu eyi-15 kuqala, bese ugeza ngensipho yokufakelwa ejwayelekile, ugeze izinga lokushisa uketshezi akumele leqe ama-degree angama-45, ukhololo, ikhafula indawo engcolile ingasebenzisa ibhulashi loboya elithambile ukuxubha ngobumnene, ngemuva kokuhlanza kuhlanzekile, lingaphenduka ngobumnene, thenga indawo epholile enomoya, hhayi eyokuzihlukanisa, akufanele yomiswe, hleze ngoba ivuthiwe ibangela imibimbi.
9.Indwangu ye-T / R (Inhlanganisela ye-polyester / viscose)
Kungenye yezici zendwangu ye-T / R yokwenza ijakhethi emile, ijakhethi ye-lapel nokugqoka okungajwayelekile ngenani elikhulu lendwangu ye-plaid noma umugqa, i-flash noma i-monochrome T / R.
Indwangu ye-T / R iyindwangu ehlanganisiwe ye-polyester viscose.I-polyester viscose ehlanganisiwe iyinhlobo yokuhlangana okuhambisanayo.Polyester viscose hhayi kuphela ukotini, uboya, naphakathi - indwangu ende.Wool eyaziwa ngokuthi "ibhasi elisheshayo" .Uma i-polyester ingekho ngaphansi I-50%, lolu hlobo lwendwangu ehlanganisiwe lungagcina i-polyester iqine, imelane nemibimbi, isayizi izinzile, igezwe futhi igqoke izici eziqinile.Ukuxubaniswa kwe-viscose fiber kuthuthukisa ukutholakala komoya kwendwangu nokumelana nomgodi oncibilikayo. yendwangu yehliswa.
Sebenzisa i-65/35 noma i-67/33 ye-polyester / i-viscid-blend ratio.I-Polyester / viscose blend iyafana ne-polyester / viscose. ukuqina, ukumuncwa okuhle komswakama; Kepha unomphela awuthambile.
Izinzuzo: iqinile, imelana nemibimbi, usayizi ozinzile, iyageza futhi iyagqokwa.
Kungaba ngcono permeability emoyeni indwangu, ukunciphisa pilling futhi mkhuba antistatic.
Amaphoyinti okuwasha: Umshini wokuwasha ungasetshenziswa, ungakhuhle ngebhulashi, ukuze ugweme ukugcotshwa, ukomiswa ngakolunye uhlangothi.
10.Ubuningi obukhulu be-NC
Indwangu ephakeme ye-NC uhlobo oluthile lwendwangu ehlanganisiwe noma ehlanganiswe ne-poly-i-amide (inayiloni) nentambo kakotini.
Umkhiqizo uhlanganisa izinzuzo zenayiloni nokotini wentambo.
Ukugqoka-ikhono lenyiloni lifaka kuqala phakathi kwemicu yemvelo nemicu yamakhemikhali. Ukumuncwa kwenayiloni kungcono kunaleyo ye-polyester, futhi ukugqoka kwayo ukunethezeka nokudaya kwayo kungcono kune-polyester. Ngakho-ke, ukumuncwa komswakama nokugqokwa kwendwangu kakotini ngeke kuncishiswe lapho kuhlanganiswa noma kuhlanganiswa intambo kakotini.
Inayiloni inokunwebeka okuhle kakhulu. Ngemuva kokuxuba noma ukuluka ngentambo kakotini, ukuqina kwendwangu kuyathuthuka.
Ububi bendwangu ye-NC ngukuthi: ngenxa yenayiloni ebandakanyeka ekuxhumaneni noma ekuxubeni, ukumelana nokushisa nokumelana okukhanyayo kwendwangu kubi, naka ukuwashwa noku-ayina ngenkathi kusetshenziswa ukuhlangabezana nezimo, ukuze kugwenywe ukulimala.
Izici zayo zesitayela ezivelele: akulula ukugqoka, zithambile futhi zikhululekile, kulula ukuzihlanza.
Ungashi elangeni, ungazisoli.
Izindawo zokuwasha: Ungomi zihlanzekile, zome ebumnyameni.
Indlela yesondlo: ungayigqoki isizini, buyisela emuva kuqoqo lesikhwama sepulasitiki.